Ukujolisa phi kwiNtengiso yakho ye-B2B | Martech Zone
Ukujolisa phi kwiNtengiso yakho ye-B2B
NgoMvulo, Agasti 29, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 UJenn Lisak Golding
Econsultancy basandula ukukhupha ingxelo yabo ka-Agasti 2011 ye-B2B ye-Intanethi ye-Intanethi, ichaza izinto ezifunyenwe kutshanje kwintengiso ye-Intanethi, e-commerce, kwi-Intanethi nakwimithombo yeendaba ezinxulumene noko. Ngelixa ingxelo ibonelela ngezinto ezininzi ezifunyanisiweyo, nazi iinkcukacha-manani ezinomdla ezazime ngokwenene:
Iziganeko zeshishini kunye neentengiso zisaqhubeka zibalulekile kubathengisi beB2B. Ngo-2010, i-85% yabathengisi batyale imali kwintengiso yemisitho, kunye nama-28% elo qela liceba ukonyusa olo tyalo-mali ngo-2011.
Digital Media zii-8 zezona ziteshi zili-10 zisemgangathweni zokufikelela kubaphulaphuli be-B2B.
I-63% yabathengisi beB2B bayayiqonda loo nto amalinge emveli anefuthe elomeleleyo kwimisebenzi ekwi-Intanethi ngokubhekisele kwitrafikhi yokukhangela, ukugcwala kwewebhu kunye nokuguqulwa kwi-Intanethi.
Ngokomndilili, abathengisi bachitha iipesenti ezingama-38 kuhlahlo-lwabiwo mali lwabo luphela kulwazi lwebranti, iipesenti ezingama-34 kwisizukulwana esikhokelayo, kunye nama-28% kugcino lwabathengi. Ngokuphikisana, I-28% yohlahlo-lwabiwo mali kwi-Intanethi Bazinikele ekwaziseni ngumahluko owabelweyo phakathi kokuveliswa kwesikhokelo kunye nokugcinwa kwabathengi.
Ngaphezulu kwesiqingatha (55%) semibutho ye-B2B ekwenziwe uphando ngayo ngoku enesebe Eyona nto kugxilwe kuyo kukugcina abathengi kunye nokunyaniseka. I-94% yezi nkampani zichaza ukuba kukho inqanaba eliphezulu lenkxaso yesigqeba sokwenza isebe elinje. Ngaphezulu kwesinye kwisithathu (36%) sabaphenduli bachaza ukuba isebe labo linika ingxelo ngqo kwi-CEO; Ingxelo ye-21% kwi-Sr VP / VP yeNtengiso kunye ne-15% yengxelo kwi-Sr VP / VP yeNtengiso
Ukuba ujongana ikakhulu nabathengi be-B2B, ndincoma kakhulu ukuba uthathe ixesha lokuhlala phantsi ufunde le ngxelo, ejongene nayo yonke imiba yeshishini lokuthengisa kwi-Intanethi.
Ezona Ndlela ziKhawulezayo nezilula zokuKhawulezisa iSiza sakho